संस्थागत मूल्याङ्कनको लागि वित्तीय विवरण अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ ? यी कुराहरु नभुल्नुस् निगरानी -
काठमाडाै‌ं । आर्थिक बर्षको अन्त्य भएसँगै अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चौथो त्रैमासका रिपोर्टहरु धमाधम आउँदै छन् । दोस्रो बजारका लगानीकर्ताहरु त्यही रिपोर्टका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर किन्न दौडिने प्रवृत्ति पनि देख्न सकिन्छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको पुँजी पुर्याउन बोनस सेयरको सहारा लिने भएकोले चौचो त्रैमासको प्रतिवेदनले देखाएको नाफाले बोनस निर्धारण गर्ने भएकोले पनि विगतका बर्षहरुमा भन्दा यो बर्ष वित्तीय विवरणहरुप्रति चासो हुनु पनि स्वाभाविक नै हो ।
यद्यपि यो बर्ष अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चौथो त्रैमासमा अप्रत्यासित नाफा हासिल गरेका छन् । अझ नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको जेठ महिनाको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विवरणले देखाएको नाफाको तुलनामा समेत अन्तिम महिनाको नाफामा आकाश पातालको फरक देखिएको छ ।
आखिर किन हुन्छ त नाफामा अप्रत्यासित सुधार ? बजार अनुसन्धानले त्यसो हुनुमा विभिन्न तत्वको प्रभाव रहेको देखाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी व्यवस्थापन पहिलो तीन त्रैमासमा निक्षेप र कर्जा वृद्धिमा बढी केन्द्रित हुने तर कर्जा उठाउनतर्फ केन्द्रित नहुने भएकाले ऋणीहरु आफ्नो ऋण तिर्न हतारिँदैनन् । तर चौथो त्रैमाससकिएपछि उनीहरुको ध्यान कर्जा उठाउनतर्फ जाने भएकोले तुलनात्मक रुपमा अन्तिम महिनामा बढी नाफा देखिन जान्छ ।
अर्कोतर्फ बैंकको बोर्डले व्यवस्थापनलाई खुद नाफा वृद्धि गर्न लक्ष्य दिएका हुन्छन् । त्यस्तो लक्ष्य पूरा गर्न निरन्तर दबाब दिनाले बैंक व्यवस्थापन नाफा वृद्धि गर्न सक्रिय हुन्छ फलस्वरुप अन्तिम महिनामा बढी नाफा देखिने गरेको पाइएको छ ।
बैंक व्यवस्थापनले अक्सर आफ्नो कार्यक्षमतालाई उच्च देखाउन केही परिसूचकहरुलाई तोडमोड गर्ने गरेको पाइएको छ । यही बर्षको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रममा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिशेयर आम्दानी लगायत विवरणहरुमा केही तोडमोड गरेर प्रकाशन गरेको समेत पाइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय विवरणमा देखिएका संख्यात्मक प्रगतिलाई अक्सर बैंकका व्यवस्थापनहरु आफ्नो सफलता ठान्छन् । आम लगानीकर्ता र बैंक बोर्डसमेत वित्तीय संस्थाको गुणात्मक सुधार भन्दा खुद नाफा र प्रतिशेयर आम्दानीलाई नै बढी महत्व दिने गरेको पाइएको छ । त्यसैले अल्पकालीन रुपमा बढी नाफा देखाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनले आफ्नो नाममा भएका चलअचल सम्पत्ती बेचेर नाफा बढाउने प्रवृत्ति पनि देखिँदै आएको छ । त्यसैले विशेषतः लगानीकर्ताले नाफा वा प्रतिशेयर आम्दानी जस्ता संख्यात्मक विषयलाई मात्र नभएर कम्पनीको नाफाको प्रकृति, व्यवस्थापकीय दक्षता जस्ता विषयहरुलाई समेत ध्यान दिनु आवश्यक छ ।